Ny fiantraikany amin'ny aretina | Reef Resilience
Karazana aretina voajanahary any Karaiba. (A) Diploria strigosa miaraka amin'ny aretin'ny hoditra mainty, (B) Dichocoenia stockesii amin'ny pesta fotsy, (C) Acropora cervicornis miaraka amin'ny tarika fotsy ary (D) Montastraea faveolata miaraka amin'ny sendikà mavo mavo. Sary © E. Weil, avy amin'ny NOAA Foibe momba ny fitsikilovana sy ny fanamarinana ny morontsiraka
Ny fihanaky ny aretina Coral dia mety hitarika amin'ny fihenam-bidy amin'ny ankapobeny ny fonon'ny vatohara mivantana ary hampihenana ny haavon'ny kolonialy. Amin'ny toe-javatra faratampony, ny fipoahan'ny aretina dia afaka manomboka fiovan'ny toetr'andro avy amin'ireo vondrom-piarahamonina coral- ho an'ny vondrom-piarahamonina algal. Ny aretina mitaiza ihany koa dia mety miteraka fanavaozana ny kolera eo amin'ny mponina: ohatra ny fiovana avy amin'ny mpanamboatra haran-dranomasina lava be, izay miparitaka amin'ny vondrom-piarahamonina madinidinika sy kely kokoa. ref
Ny aretina mikraoba koa dia mety miteraka fiovana manan-danja eo amin'ny taham-piterahana, ny tahan'ny fitomboana, ny fiaraha-monina, ny fahasamihafan'ny karazan-javamaniry, ref
Ny aretina mikraoba dia zaraina maneran-tany. Ity sarintany manaraka ity dia mampiseho ny toerana misy ny aretina lehibe sasany.
Ity sarintany ity dia maneho ny toerana misy ireo aretina lehibe manoloana ny haran-dranomasina. Ny sokajy "Ny aretina hafa" dia ahitana tarika skeletal, tarika manga, tsiranoka nokraisina, trematodiasis, tsotsotra fotsy ary aretina hafa izay tsy voamarina. Kitiho raha hanitarana. Loharano: Rano any amin'ny Risk 2011
Ny Karibeana dia lazaina ho "toerana mafana" ho an'ny aretin'ny vatohara noho ny fihanaky ny aretina vaovao sy mahavariana, mihamatanjaka ny fisehoan-javatra, ary ny fielezan'ny haitao vaovao eo amin'ireo karazana sy faritra vaovao. ref Na dia ny 8% amin'ny vatohara rehetra ihany aza no hita any Karaiba, mihoatra ny 70% ny tatitra momba ny aretina rehetra avy amin'ity faritra ity. ref Ankoatra izany, farafahakeliny 82% amin'ny karazam-boankazo any Karaiba no manana aretina farafahakeliny. ref
Maro ny fanadihadiana manaporofo fa mihabetsaka ny aretina any amin'ny faritra Indo-Pasifika, Samoa amerikanina ref ary Hawai'i ref dia ambany. Na dia izany aza, manerana ny faritra Indo-Pasifika, dia toa mampiseho ny fihanaky ny aretina sy ny karazana aretina hatramin'ny aretin'i 2000 ny aretina. ref Rehefa mitombo ny ezaka hitaterana ny aretina voa-corollaire amin'ny ankapobeny, dia miha-mitombo hatrany ny lisitry ny karazam-biby voan'ny aretina, ny toerana misy ny aretina, ary ny fatran'ny aretina.